पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट तीन सय वर्ष पुरानो मूर्ति गायब – Butwal 24 News
August 6, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट तीन सय वर्ष पुरानो मूर्ति गायब
पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर पाटी नंं. २० स्थित पुरातात्विक महत्वको कामदेव भगवान्को मूर्ति चोरी भएको छ । स्थानीयका अनुसार सो मूर्ति तीन सय वर्ष पुरानो हो ।जयबागेश्वरी डठू टोलका स्थानीय जलद वैद्यका अनुसार पाटी नं. २० कामदेवको मूर्ति गत चैतसम्म सुरक्षित थियो ।
पाटीबाट मूर्ति गायब भएपछि स्थानीयले खोजीका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा निवेदन दिएका छन् । वैद्यका अनुसार पाटीसँग साँध जोडिएका घरधनी सन्तोष शर्माले गत चैतमा मूर्ति जडान गरिएको पर्खाल भत्काएका थिए । सो ठाउँमा शर्माले अहिले निजी कार पार्किङ गर्दै आएका छन् । उक्त जग्गा पनि सार्वजनिक रहेको र पर्खालको मूर्ति त्यहीवेलाबाट बेपत्ता भएको वैद्यले बताए ।
‘पाटी नं. २० मा रहेको कामदेवको मूर्ति एकाएक बेपत्ता भयो । चैत महिनासम्म त्यहीँ देखिन्थ्यो, अहिले त्यहाँ मूर्ति छैन । मूर्ति भएको पाटीको जग्गा पनि स्थानीय सन्तोष शर्माले अतिक्रमण गरेका छन् । उनले पर्खाल पनि भत्काए । अहिले त्यहाँ कार पार्किङ हुँदै आएको छ,’ वैद्यले भने ।
तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर पञ्चायतले प्रकाशन गरेको इन्भेन्ट्रीमा समेटिएको तथ्यांकले पनि पाटी नं. २० मा लगाइएको पर्खालमा कामदेवको मूर्ति जडान गरिएको देखाइएको छ । पर्खाल ०४४ मा तत्कालीन नगर पञ्चायतले बनाएको थियो । त्यसअघि त्यहाँ पाटी थियो । पाटीमा बसेर नेवार समुदायले भजनकीर्तन गाउने गर्थे । तर, अहिले उक्त जग्गा सुशीला पुडासैनी शर्माको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । सुशीला सन्तोषकी आमा हुन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा.घनश्याम खतिवडाले पनि पाटी नं. २० मा रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको र त्यहाँ राखिएको मूर्ति पनि गायब भएको सूचना प्राप्त भएको बताए । ‘पाटी नं. २० को जग्गा तलमाथि भएको सूचना हामीले पनि पाएका छौँ । त्यहाँ १८औँ शताब्दीमा स्थापना भएको कामदेवको मूर्ति पनि गायब भएको सूचना आएको छ । यसप्रति क्षेत्र विकास कोष गम्भीर छ । आवश्यक अनुसन्धान जारी छ,’ खतिवडाले भने ।
बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले पनि पाटी नं. २० को सार्वजनिक जग्गा मिचिएको र पर्खालमा जडान गरी राखिएको कामदेवको मूर्ति हराएको बताए । ‘पर्खालमा कामदेवको निकै पुरानो मूर्ति थियो । पर्खाल भत्काएपछि त्यहाँ राखिएको मूर्ति एकाएक गायब भयो । पर्खाल लगाउनुअघि त्यहाँ सार्वजनिक पाटी थियो । पाटीमा बसेर नेवार समुदायले भजन गाउँथे । अहिले पाटी पनि छैन, मूर्ति पनि छैन,’ उनले भने ।